kukhunjulwe abadlali | News24
06:02 23/08/2018 Thami Ka-Nkosi
Bekubanjwe indumezulu yomcimbi wokubungaza abadlali beqembu lebhola lezinyawo iGcilima Aces asebadlule emhlabeni. Lomcimbi wabe ubanjelwe ehholo lomphakathi iGcilima hall ngeSonto eledlule.
Ekhulumela abakwasidlodlo uKapteni Musa Mboyisa wathi ezemidlalo zineqhaza elihle kakhulu emphakathi ukwehlisa izinga lobugebengu.
“Abalandeli bebhola bayazi ukuthi eSoweto kunamaqembu amabili ekade aba yizimbangi Amakhosi (Kaiser Chiefs) namaBhakaniya (Orlando Pirates) nakhona eGcilima yi-Aces ne-Peacemakers,” kubeka yena.
Wathi nakuba bekuba khona ukungaboni ngasolinye ngesikhathi kudlalwa ngenxa yokungafuni iqembu lakho lihlulwe kodwa bekwenza isimo sibesihle endweni futhi kubekhona uzinzo.
Ekhulumela imindeni yabadlali asebalala uZwane Langazane obonge kakhulu ukuthi lomcimbi wenza bangakhohlwa asebaba mathambo mhlophe.
Ekade bedlalela i-Aces o-Klembe Xama, Shisa Ngcungama and Simphiwe Ngcungama bawubonge kakhulu umphakathi nemindeni nezihlobo ngokuba yingxenye yomcimbi ukukhumbula laba ekade bedlala nabo ibhola.